Dowladda Hoose ee Magaalada Manisa waxay sii wadaysaa howlaheeda wasakhda iyo nadiifinta ee laga bilaabay baabuurta gaadiidka dadweynaha marka loo eego la dagaallanka cudurka Coronavirus (Kovid-19). Gaadiidka Dadweynaha, oo ah aag caan ah oo dadweynaha ku dhex nooli marka la eego halganka wax ku oolka ah ee ka dhanka ah coronavirus [More ...]
Ururka Shaqaalaha Gaadiidka United States (BTS) Izmir Laanta ayaa ku dhawaaqay dalabkeeda qaab qoraal ah iyadoo la raacayo tillaabada coronavirus. Qiyaastii 50.000 maalin kasta MARMARAY, 10.000 oo BAŞKENTRAY oo Ankara ah iyo 54.000 oo jooga İZBAN ee İzmir [More ...]
Hoos u dhaca ku yimid gaadiidka dadweynaha ee cudurka daacuunka 'corona' ayaa ku dhacay ganacsatada basaska. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay go’aansatay inayan ka qaadin khidmadaha marinnada basaska minkiiba mid walba oo ay bixiso saddex bilood. Daraasado si looga hortago cudurka faafa ee İzmir [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Denizli ma iloobin ardayda haysata kaararka "Denizli Student Card" sababtuna tahay waxbarashadii la joojiyey awgeed coronavirus. Hadhaaga harsan ee ardayda ku xerooday kaarka ardayda ee Denizli March 2020 waa la soo celinayaa. Denizli [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir ayaa kormeertay basaska iyo basaska laga raaco xarunta basaska taas oo qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah faafitaanka cusub ee coronavirus. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay kormeertay basaska iyo basaska laga raaco xarunta basaska laga raaco ee ka dilaaca dillaaca cusub ee coronavirus. Wasaaradda Arrimaha Gudaha si loola dagaallamo cudurka faafa [More ...]
Dowladda Hoose ee Manisa, oo si adag u adeegsaneysa tallaabooyinka coronavirus ee magaalada oo dhan, ma hakineyso kala-baxyada jeermiska iyo nadaafadda. Xaaladda guud, kooxaha Dawladda hoose ee Magaalada waxay ka fuliyeen shaqooyinka ka-hortagista xad-dhaafyada iyo joogsiga baska. coronavirus [More ...]
Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha ee Jamhuuriyadda Turkiga, ayaa u mahadceliyay shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee ka shaqeeyay dadaallo badan oo dib loogu soo celinayo bukaannadii ku dhacay Kovid-19 oo ka soo muuqday Wuhan, Shiinaha iyo adduunka oo dhan. World [More ...]
Fayraska corona (COVID-19), oo ka bilowdey Wuhan, Shiinaha oo ku faafay Shiinaha iyo adduunka oo dhan, wuxuu saameeyaa ma aha oo kaliya dhaqaalaha Shiinaha laakiin sidoo kale dhaqaalaha adduunka. Dowladaha, hay'adda iyo shaqsiyaadka ku saabsan hirgelinta tillaabooyinka iyo xeerarka soo socda [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Denizli waxay sii wadaysaa nadiifinta iyo si joogto ah u baabi'isaa dhammaan goobaha adeegga ee ka dhanka ah cudurka loo yaqaan 'coronavirus', iyadoo muwaadiniintu ay sheegeen inay aad ugu qanacsan yihiin tillaabooyinka la qaaday. Halganka coronavirus-ka magaalo weynku wuxuu u socdaa si aan kala go 'lahayn [More ...]
Dowladda Hoose ee Manisa, oo si firfircoon ula dagaallama cudurka 'coronovirus', ayaa si joogto ah uga shaqeyneysaa gaadiidleyda dadweynaha ee gobolka oo dhan. Dowladda Hoose ee Manisa, oo ku dhawaaqday olole nadaafadeed oo looga hortagayo cudurka Coronavirus, [More ...]
Tirada basaska Izmir lama yareeyn Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir ma yareyso tirada basaska, kuwaas oo ah gaadiidka ugu badan ee lagu isticmaalo gaadiidka dadweynaha, in kasta oo ay hoos u dhacday tirada rakaabka si loo ilaaliyo masaafada bulshada. “Gaadiidka Dadweynaha” oo ay daabacday Wasaaradda Arrimaha Gudaha [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay sii wadaysaa wada shaqeynta shaqaalaha daryeelka caafimaad ee ka tagi kari waayey howlahooda sababo la xiriira daacuunka cusub ee cudurka 'coronavirus'. Cunno fudud oo loo diyaariyey xirfadlayaal caafimaad ayaa bilaabay in loo qaybiyo isbitaalada. Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir si ay u taageerto shaqaalaha caafimaadka ee Izmir [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Denizli, oo ka dhigaysa basaska degmadu lacag la’aan u tahay shaqaalaha caafimaadka ee la halgamaya feyraska corona habeen iyo maalinba, ayaa u keenay isku habboonaantaas farmasiilayaasha iyo shaqaalaha farmasiiga. Ka dib markii ay ka soo baxday Wuhan, Shiinaha [More ...]
Warbixinno aan macquul ahayn oo ka soo baxay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha ee warbaahinta qaar ka mid ah ayaa sheegaya in tallaabooyinka coronavirus aan laga qaadin Dekadda 'luseşme Ulusoy Port' iyo in shaqaale leh tijaabada cudurka 'coronavirus' ay sii wadeen shaqaaleynta. [More ...]
“Codsiga kursi-cagaarka” waxaa lagu bilaabay gaadiidka dadweynaha ee İzmir. Hadda laga bilaabo, muwaadiniintu waxay ku fariisan doonaan kuraasta lagu calaamadeeyay midab cagaaran waxayna ilaalin doonaan fogaanta bulshada. Wareegtada Coronavirus, oo ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Gudaha, boqolkiiba awoodda ay u leeyihiin gaadiidka dadweynaha [More ...]
In kasta oo wasaaradaha, dawladaha hoose iyo xisbiyada siyaasadeed ee laxiriira cudurka faafa ee coronavirus, oo wax yeeleeyey dunida kuna dilay kumanaan qof, ay halkoodii kasii wadaan ayadoon hoos u dhicin, hal talaabo ayaa ka yimid EGİAD. Dunida oo dhan [More ...]
Dowladda Hoose ee Manisa, oo sii waday halgankeedii ku saabsan coronavirus si wax ku ool ah ilaa maalintii ugu horreeyay, ma iloobin iskaashatooyinka bixiya adeegyada gaadiidka dadweynaha ee hawshan. 34 boqolkiiba 5 iskaashatooyinka ka shaqeeya magaalada oo dhan [More ...]
Iyada oo qayb ka ah la dagaallanka cudurka dilaaga ah ee coronavirus, Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa soo saartay wareegto ku saabsan gaadiidka rakaabka ee gaadiidka dadweynaha, oo ah qiyaastii 50 boqolkiiba rakaabka qaadaya awoodda lagu sheegay ruqsadda gaariga. Bulsho ahaan gaadiid caafimaad qaba [More ...]
« 1 2 3 ... 224 »